Madaxweynaha dalka oo la kulmaya senetarada Jubilee | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo la kulmaya senetarada Jubilee
Madaxweynaha dalka oo la kulmaya senetarada Jubilee
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa in uu maanta kulan la qaato xubnaha aqalka sare ee ka tirsan xisbiga talada wadanka haya ee Jubilee.
Shirkan ayaa lagu qaban doonaa xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada Nairobi.
Waxaa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhanka kale baarlamaanka iyo aqalka sare ay galinka dambe ee maanta kal-fadhiyo yeelanayaan .
Ilaa iyo hadda ma cadda waxa ka soo bixi doono kulanka uu maanta madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta la yeelanayo senatarada in kastoo ay jirto hadal hayn ah in lagu bartilmaameedsan karo Irungu Kang’ata.
Previous articleNew Zealand oo hakinaysa xiriirkii kala dhexeyay Myanmar
Next articleIEBC oo laga hor istaagay qabashada afti dastuuri ah